Indlu kwilali yeSithili sePeak enemibono emangalisayo - I-Airbnb
Indlu kwilali yeSithili sePeak enemibono emangalisayo
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguPhillip
Ibekwe ngokugqibeleleyo inja enobubele indlu enemibono emangalisayo entliziyweni yeSithili sePeak-Youlgreave, nr Bakewell. Ibekwe ngaphesheya kweNdlela yeLimestone kunye neeyadi ezili-100 ukusuka eBradford Dale, kukho intabalala yokuhamba okuhle ngokuthe ngqo emnyango wakho. Kukho ii-pubs ezi-3 ezilalini ezingaphakathi kwemizuzu eli-10 yokuhamba ukusuka endlwini, zonke zibonelela ngokutya okuphekwe ekhaya okumnandi kunye nokukhethwa kwee-ales zasekhaya. Le lali ikwaqhayisa ngevenkile yelali egcweleyo, amagumbi eti, indawo yokubhaka kunye neposi.
Indlu ecandiweyo ene-driveway yokupaka izithuthi ezimbini kunye negadi enkulu enobuhlobo. Kumgangatho ongaphezulu kukho amagumbi amabini okulala kunye negumbi lokuhlambela elikhulu elinamagumbi okuhlambela ahlukeneyo kunye nebhafu. Igumbi lokuhlala elibanzi lineesofa ezimbini kunye nesitshisi selog esinendawo encinci yogcino-mali ekhokelela egadini. Ikhitshi elikhulu lifakwe ngokupheleleyo kwaye lixhotyiswe ngesitovu sombane, i-oveni, imicrowave kunye nesikhenkcisi sefriji. Igumbi lokuhlambela elinomatshini wokuhlamba kunye nesomisi. I-WiFi yasimahla kunye nephakheji ye-Sky TV esemgangathweni inikezelwe.
I-Youlgreave ibekwe embindini wePaki yeSizwe yeSithili sePeak eqhayisa ngamaphandle amangalisayo aneembono zokuthatha umoya wakho kude. Ikwindawo efanelekileyo yokuhamba, ukukhwela ibhayisekile, ukukhwela, ukubukela iintaka okanye nje ukuphumla nokuphumla. Ngokwenene yiparadesi yabahambi! Jonga uhambo olujikeleze iBradford Dale kunye neLathkill Dale ngqo ukusuka emnyango wendlu. Indawo efanelekileyo yokuhlola iSithili sePeak esibanzi kunye neelali ezingabamelwane zaseMiddleton, eOver Haddon, eBirchover, eStanton-in-Peak naseMoneyash. Iidolophu zentengiso ezidumileyo zaseBakewell kunye neMatlock zombini zifikeleleka ngokulula kunye neChatsworth entle kunye neHaddon Hall estates. Ilali entle ngokwayo inee-pubs ezintathu ezinobuhlobo nezinja zonke zinika ukutya okumnandi okuphekwe ekhaya kunye ne-ale yokwenyani. Kukwakho nevenkile yelali egcweleyo, iofisi yeposi, igumbi leti kunye nevenkile yokubhaka zonke ngaphakathi kwemizuzu eli-10 yokuhamba ukusuka endlwini.
Umbuki zindwendwe ngu- Phillip
Sidla ngokubakho ukuze sijongane nazo naziphi na iingxaki kwaye sinokufowunelwa nge-imeyile okanye ngefowuni.